Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta soo qaban qaabisay 16 maalmood ee ka hortaga tacadiyaadka kadhanka ah haweenka. – MESAF
News & Events News Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta soo qaban qaabisay 16 maalmood ee ka hortaga tacadiyaadka kadhanka ah haweenka.
Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta soo qaban qaabisay 16 maalmood ee ka hortaga tacadiyaadka kadhanka ah haweenka.
Waxaana kaso qayb galay Wasiirka wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta wasiir ku xigeenada wasaaradaha qorshaynta iyo xanaanada xoolaha iyo Agaasimaasha guud. ee maalgashiga
Ugu horayna waxaa madashaas kelmad kasoo jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland oo ka warbixiyay ka wasaarad ahaan doorka ay ka qaataan cidhib tirka tacadiyaadka ka dhanka ah.
16 Days of Activism against Gender-Based Violence #16DAYSOFACTIVISM